Party Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: ပါတီ
နေအိမ် > ပါတီ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပ၏ရဲတိုက်များနှင့်ချစ်စရာကောင်းသည့်လမ်းများနှင့်နေရာများသည်နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်များဖြစ်လာကြသည်. ယနေ့အချိန်အထိဥရောပသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဓိကကျသောပါတီတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှခရီးသွားများအတွက်ဘီစီဘွဲ့နှင့်ပါ ၀ င်သူများအတွက်ပါတီပွဲများဖြစ်သည်…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သူတို့အားပါတီအပေါ်ဦးထုပ်နှင့် stomping ဘွတ်ဖိနပ်မှုအဖွဲ့ရရန်အချိန်! ကျနော်တို့ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးပွဲတော်များအဘို့အမြျှောအဘယ်မှာသူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့ပေါ်မှာဆိုရင်. သငျသညျနွေရာသီအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း party ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? ?? ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားခြင်းအကြောင်းကိုပညာပေးရန်ရေးသားခဲ့သည်…